Tababare Simeone oo difaacay dhigiisa Valverde, kaasoo halis ugu jira in laga ceyriyo shaqada kooxda Barcelona – Gool FM
Dajiye January 11, 2020
(Saudi Arabia) 11 Jan 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa si weyn u diifaacay dhigiisa Barcelona ee Ernesto Valverde, kaddib guuldarradii ka soo gaartay kulankii wareega afar dhamaadka ee koobka Spanish Super Cup.
Atletico Madrid ayaa Arbacadii guul soo laabasha ah kaga gaartay kooxda Barcelona kulankii wareega afar dhamaadka ee koobka Spanish Super Cup, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-3, waxay kulanka finalka balan kaga sameysteen kooxda ay isku magaalada yihiin ee Real Madrid.
Warbaahinta gudaha dalka Spain ayaa waxay shaaca ka qaadeen Jimcihii shalay warbixin xaqiijineysa in guddi sare ee maamulka kooxda Barcelona ah ay kula kulmeen Xavi Hernandez magaalada Doha ee dalka Qatar, si ay kaga wada heshiiyaan inuu noqdo macalinka xiga ee Barca.
Haddaba Macalinka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka habeen dambe ee finalka Spanish Super Cup wuxuu garab istaag u muujiyay Valverde wuxuuna yiri:
“Valverde waa tababare weyn wuxuuna muujiyay awood weyn uu ku sii hayn karo kooxdiisa dhowr sano”
“Laakiin anaga ayaa noqonay koox ka fiican sidii ay aheyd sanadihii hore, waxaan helnay khibrado badan, waxaana ku soo barbaarnay nolosha iyo kubadda cagta”.
Liverpool oo wali la celin la'ayahay kaddib markii ay guul dirqi ah ka soo heshay kooxda Tottenham… +SAWIRRO